माक्र्सवाद परिवारवादमा विसर्जन भयो - RoadMapNews
माक्र्सवाद परिवारवादमा विसर्जन भयो
– बालकृष्ण ढुंगेल, नेकपा माओवादीका पूर्वनेता
RoadMap News	प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २९, २०७७ समय: ६:०४:४३
पार्टी एकीकरणपछि पूर्वमाआवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् । ओखलढुंगामा उज्जन हत्याकाण्डको आरोपमा उनी जेलभित्रै भएको बेला पार्टी एकता भयो । बाहिर आउँदा जिम्मेवारी विहीन थिए । अहिले पनि उनको कुनै जिम्मेवारी छैन । यसै सन्दर्भमा उनीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
० पार्टीमा के जिम्मेवारी छ ?
कुनै तोकिएको काम र जिम्मेवारी नभएको कारण आजकल म आफ्नै दिनचर्यामा रमाइरहेको छु ।
० प्रचण्डसँग केही गुनासो पोख्नुभएको छैन ?
प्रचण्डलाई हामीले बुझेनौँ वा उहाँले यो धर्तिलाई बुझ्नुभएन ? यो द्विविधा उत्पन्न भएको छ । कि त हिजोको प्रचण्ड बेहोस हुनुहुन्थ्यो । होइन भने, आजको प्रचण्ड बेहोस भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो निश्कर्ष छ । आजको प्रचण्ड होसमा हो भने हिजोको प्रचण्ड बेहोसमा हुनुहुन्थ्यो । हिजोको प्रचण्ड होसमा हो भने आजको प्रचण्ड बेहोसमा हुनुहुन्छ । के हो ? यहाँहरुले बुझ्ने कुरा हो । मचाहिँ उहाँलाई केही भन्ने पक्षमा छैन ।
० के पार्टी एकता नै गलत हो ?
हामी नै हौ, हिजो हामी एमालेलाई संशोधनवादमा पतन भएको भन्ने । एमाले प्रतिक्रियावादमा जाँदै गरेको भनेर आरोप लगाउँदै झण्डै प्रचण्डवाद नै बनाउने थितितिर उन्मुख भएका हामी नै हौं । एमालेहरु भन्थे, जनयुद्ध आतंक र अपराध हो । त्यसको समीक्षाबिना पार्टी एकता गर्नु हुँदैन, यसले राम्रो गर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो ।
० के एकतापछि विधि र प्रक्रिया सबै ठीक छ ?
नेतृत्वले पार्टी एकता गरिसकेपछि विधि, प्रक्रिया मिल्यो वा मिलेन त्यो त उदांगै छ । कसले खाने, कसले चलाउने भन्ने विषयमा पार्टी एकता गरिएको थियो । लामो समय ओलीले चलाएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर खान पाउने गिरोह लागिहाले । यो त ‘ग्याङ वार’ हो । विचारको वार हैन । शेरै शेरको पार्टी । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री चलाउनुभएको, १५ वर्ष पार्टी हाँक्नुभएको, झलनाथ प्रधानमन्त्री चलाउनुभएको, १३ वर्ष पार्टी हाँक्नुभएको, प्रचण्ड पनि ३२ वर्ष वैकल्पिक सत्ताको अभ्यास गर्नुभएको । अर्काे प्रधानमन्त्री छन् । भेट्न जान प¥यो भने समय मिलाउनुपर्छ । हिजो उहाँको आदत थियो अरूलाई टाइम दिएर भेट्ने । सत्ताको स्वाद, लोभ र अहंकारको विम्बमा ग्याङ वार हो । डाडु आफैँले समाउनुपर्ने, आफैँले बाँड्नुपर्ने यो कसौंडीको लडाइँ मात्र हो, अरू केही होइन ।
० प्रचण्डलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
प्रचण्ड भनेको मान्छेभित्रको पनि उत्कृष्ट मान्छे हो । मान्छेले सबैलाई धोका दिएपछि बल्ल मान्छे हुन्छ । सबै मान्छेलाई धोखा दिन सक्ने मान्छे नेता हुन्छ ।
० त्यत्रो माओवादीको विरासतमाथि किन खेलबाड भयो होला ?
प्रचण्डका आफ्नै दुःखहरुले उहाँलाई यहाँसम्म डो¥याइरहेको छ । परिवारका सदस्यहरुको चिन्ता गर्नुहुन्छ, राम्रै होला । ०७४ मा चितवनमा चुनाव हार्ने डर थियो । एमालेसँग नमिली सुख भएन । माक्र्सवादलाई परिवारवादमा लगेर विसर्जन गर्ने हतारो पनि हो । किनभने, नेपालमा वाम मुभमेन्ट समाप्त पार्न पार्टी एकता नगरी नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थियो ।
० के हिजोको लडाइँप्रति पछुतो छैन ?
हामी इमान्दार छौँ, तर इमान्दार हुनुपर्ने मानिसहरु बेइमान भए । त्यसकारण मेरो हिजोको बाटो गलत थियो भनेर म भन्दिनँ । म र हामीलाई, अनि सिंगो जनतालाई धोका दिनेहरु गद्दार हुन् । प्रष्टैसँग भन्नुपर्छ, नेपालमा जुन उद्देश्यका लागि राजनीति लडियो, हाम्रो कारण त्यो उद्देश्य बांगिएको छैन । हामीले गर्नुपर्ने योगदान, त्याग, निर्वाह गर्नुपर्ने बलिदानको मोर्चामा कुनै कञ्जुस्याइँ गरिएन । संयोग, दुश्मनले नमारिदिएर बाँचेका हौँ । आफ्नो सेनाको घेरामा बसेर कमाण्ड गर्न त सजिलो हुन्छ, तर दुश्मनको घेराभित्र पसेर, १० औं वर्ष जेलमा कठोर यातना बिताएर आफ्नो निष्ठा, आस्था जोगाएर कठघराबाट बाहिर आउनु चानचुन कुरा हुँदैन । प्रचण्ड जेल परेको भए पो यातना के हो ? थाहा हुन्छ । बेल्ना लगाउँछ भन्यो भने रोटी बेल्ने बेलना हो वा अरू नै ? रोल लगाएर पेल्छ भन्यो भने उहाँहरूले थाहा पाएको क्रिम रोल, बटर रोल, चिकेन रोल । हामीले भोगेको रोल अर्कै छ । होसमा हुँदा त समीक्षा हुँदैनथ्यो, अहिले बेहोसीमा के समीक्षा होला र ?
० न्याय सम्पादनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
न्याय हराएको, न्याय बिक्री भएको देशमा दण्डहीनताको स्थिति कस्तो होला ? हिजो सर्वाेच्च अदालतले कानुन, आफ्नो नजिर सिरानीमा हालेर मेरो न्यायमाथि बलात्कार गरेको पात्र हुँ भनेर बोल्दा संसार नै मलाई लखेट्न लाग्यो । ०६२÷६३ पछिको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन गायब पार्नु नै नेपाली जनतामाथि धोका दिनु हो । आज प्रचण्ड, बाबुराम, ओली, देउवा कसैलाई त्यो आयोगको प्रतिवेदन चाहिएको छैन । जनताको आवेगलाई निस्तेज पार्नका लागि आयोग बनाउने ? रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमाथि ओथारा बसेर खिलराज रेग्मी र लोकमानसिंह कार्कीजस्ता चल्ला जन्माउने ? अनि तिनै नेताले यो देशको विकास गर्छाैं, निकास दिन्छौं भन्दा हामीले पत्याइदिनुपर्ने ? बालकृष्ण ढुंगेलजस्ता लाखौं पात्र साइड लागिसके, अब किनारा नलागेका लाखौं पात्र साइड लाग्छन् । उहाँहरूको न्यायिक यात्रा हो भने रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुप¥यो । नभए रायमाझी आयोग बनाउनु गलत थियो भनेर जनतामाझ सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुप¥यो ? बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल हाल्न नांगै जुलुस निकाल्ने मानव अधिकारवादी रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनका लागि किन नांगिन तयार छैनन् ? नागरिकले ऐनमा पाएको माफीको सुविधासमेत दिनुहुँदैन भनी सनक्रिम दलेर बबरमहलमा उर्लने शुद्धतावादीहरू आज किन रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन खोज्दैनन् ?
कोरोना कहरमा सरकारलाई सर्वोच्चको यस्तो…
दशैंअघि लकडाउन कि स्वास्थ्य संकटकाल…
सबै सरकारी अस्पताल कोभिड अस्पतालमा…
गरिबी घटाउन एनआरएनएले सरकारसँग सहकार्य…
खश समुदायलाई आदिवासीमा सुचिकृत गर्न माग
बृहत यौनीकता शिक्षाललाई ब्यापक छलफल गरेर पाठ्यक्रममा समावेश गर्छाैं : संसद खत्री
साझा पार्टीको प्रवक्तामा पाठक
राजु परियार र शान्ता कार्किको स्वरमा “गाउँमै मनाउ दशैं तिहार”
बिनय कार्की को “तिम्रै लागि” सार्वजनिक